जनकपुर अयोध्या बस सेवा,हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नहोस् – Nepal Journal
जनकपुर अयोध्या बस सेवा,हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नहोस्
Posted By: Nepal Journal May 16, 2018 | २ जेष्ठ २०७५, बुधबार १३:२७
टिप्पणी । नेपालको जनकपुर र भारतको अयौध्या जोड्नेगरी बस सेवाको उद्घाटन हुँदा सबै नेपाली खुशी थिए । झन् प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले बस सेवाको सयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा बेग्लै उत्साह थपेको थियो ।
तर त्यो उत्साह एक हप्ताभित्रै सेलाउने स्थितिमा पुगेको छ किनभने जनकपुरबाट अयोध्या पुगेको बस जनकपुर त आइपुगेको छ तर छ महिना त्यत्तिकै थन्केर बस्न भएको छ । यातायात मन्त्रालयले रूट इजाजत, भाडा लगायतमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल बस सेवाले निरन्तरता नपाउने जानकारी दिएको छ ।
यहाँ जनताले प्रश्न गरेका छन, किन हतारमा बस सेवाको उद्घाटन गरियो ? रूट इजाजत नलिइकन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बस सेवाका उद्घाटन गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? सबै प्रकृया पूरा गरेर छ महिनापछि मख्यमन्त्री तहमै बस सेवाको उद्घाटन गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ?
सरकार प्रमुखले उद्घाटन गरेर भोलीपल्ट नै सेवा बन्द हुँदा त्यसको सन्देश के जान्छ ? यस बिषयमा दुवै देशका सरकारी संयन्त्रले बिचार पु¥याएको देखिएन । काम कम र प्रचार बढी भएको यस घटनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालबाट भारतको चुनाव प्रचारप्रसार गर्न निर्धारित समयभन्दा पहिले हतार हतार नेपाल भ्रमणमा आएका थिए भनेर आराप लगाउनेलाई बल पुगेको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बिधिवत शुरू गरेको बस सेवा प्रचारमामात्र सिमित हुँदा त्यसको सन्देश राम्रो गएको छैन । बस सेवा त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो ।
नेपाल र भारतबीच धेरै परियोजना यस्ता छन् जुन शु?मा ब्यापक प्रचारप्रसार गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । बिगतका सहमति र समझदारीलाई किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न उठाउने बर्तमान सरकार उद्घाटन गरेर ६ महिनासम्म बस बन्द गर्ने गरी किन जनकपुर अयोध्या बस सन्चालन गर्न बाध्य भयो ? यसको उत्तर आउन जरूरी छ ।
छ महिनामा बस सेवा सन्चालनमा आउने जानकारी सरकारीस्तरबाट आएपनि छ महिना मै सन्चालनमा आउँछ भनेर पत्याउने आधार छैन । बस सन्चालनमा नआए महत्वाकाँक्षी रामायण सर्किट पूरा हुँदैन । रामायण सर्किट पुरा भएन भने सवा करोड भारतीय तीर्थयात्री नेपाल भित्र्याउने नेपाल चाहना पुरा हुने छैन ।
नेपाल र भारतबिचको अतुलनीय साँस्कृतिक सम्वन्धलाई पुनजागृत गर्ने यस परियोजना कार्यान्वयन भन्दा प्रचारमा मात्र सिमित हुनुहुँदैन । उद्घाटनपछि अबिच्छिन्न सेवा सन्चालन हुन्छ भनेर बिश्वास लिएका दुवै देशका तीर्थयात्रीहरू यतिबेला निरास छन । त्यसैले चाँडै बस सेवा सन्चालन हुनुपर्छ भन्ने जनमत रहेको पाइन्छ ।
Be the first to comment on "जनकपुर अयोध्या बस सेवा,हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नहोस्"